Waa La Yaabee Musiga iyo Misaajid Maxaa Isku Keenay? ( Xog Rasmi Ah) - iftineducation.com
iftineducation.com – Muusig iyo masaajid, maxaa iska galay?, maxaase geeyey masjidka dhexdiisa?. Mise kula tahay in dhawaanahani ay soo badanayaan dadka muusig ku tumanaya masaajidada dhexdooda?.
Marka aad ciwaanka aragtid, waxaad niyada iska oranaysaa “malaha wuxuu ka hadlayaa quruumo kale oo qaarado kale ku nool”, saaxiib raali iga ahoow, waxaan ka hadlayaa bugcada aad cirbaha ku heeysid. Mucjiso!
Ma ahan wax laga fikiri karay in ay waxani dhacaan muddo sanooyin yar ka hor ah, laakiin tani waxay ka mid tahay isbadalada sida xawliga ah ku socda ee aduunka kusoo kordhaya, haddii waxani ay dhici lahaayeen 30 sanno ka hor, waliba tuulo Sheekh la siyaarto uu ku noolyahay, wuxuu iclaamin lahaa in aduun gadoonkii lasoo gaaray.
Hadaba sidee ayay arrintani macquul ku tahay?. Waxaad baraarugeysaa marka aan sheekada daaha ka rogo.
Marka aad masaajid u gashid mid ka mid ah 5-ta salaadood ee waajibka ah, waxa ugu horeeya ee aad arkeysid waa fariin darbiga ku qoran oo ku faraysa in aad masaajidka muusiga ka dhaaftid, adiga oo yaaban ayaad gudaha u galaysaa masaajidka balse ka hor inta aadan maqlin codka qiraa’ada imaanka waxaa salaadii oo dhan waswaas kaa galinaya rag masaajidka dhexdiisa muusig ku tumanaya, waliba aad moodo in ay isugu faanayaan kala casrisanaanta muusija iyo hadba heesta heesaha ugu dambeeysey ee dadka fanta tunta ay la jiboodaan marka ay maqlaan.
Mararka qaar inta muusiga uu is qabsado masaajidka gees illaa ka gees ayaa waxaa la maqli waayaa codka sameecadaha ay ka baxaya ee imaamka qur’aanka aqrinaya, rukuucda iyo sujuuda indhahaada ayaa kuu macalin ah.
Muusiga aan ka hadlayo ma ahan mid ka dhacaya kabankii Daa’uud Cali Masxaf ee la garwaaxsan jirrey, muusigani waxa uu ka dhacayaa sheey aad u yar oo jeeb gal ah, waa taleefoonka gacanta lagu qaato.
Mobile-ka wuxuu ka mid yahay aaladaha casriga ah ee aduunka kusoo kordhey, faa’iido aad u baddan ayuu nolosha dadka u leeyahay, meelaha qaarkoodna waaba sheey nolosha ku xiran, waxaa loo isticmaalaa dhamaan baahida bini’aadamka ee xagga isgaarsiinta ee maalin kasta sii kordheysa.
Mobile-ka waxaa lagu shubaa codad muusig ah si loo maqlo marka taleefoonka lasoo waco, dadka inta baddan ma ahan kuwa taleefoonadooda damiya marka ay salaadaha soo aadayaan, waxaana dhacda in taleefoonada ay soo dhacaan iyadoo salaadii lagu jirro.
Waxaa jirta sheeko qosol leh, nin ayaa taleefoon usoo dhacay masaajid dhexdiis iyadoo salaad lagu jirro, heesta soo dhacday waxay ahayd mid ay qaaday Saado Cali Warsame, nin kale oo jameecada ka mid ahaa oo malaha aad u jecel heesta ayaa heestii la hooriyey lana qaaday Saado heesta, I aamin dadka qaarkood ayaa salaada qosol oga baxay, markii salaada laga baxayna wax qosla iyo wax yaaba iyo wax carooda ayaa ayay u kala baxeen, isagiina inta is gartay ayuu illin dambe ka baxay iyadoo aan salaada laga bixin, sheekadani waxay ka dhacday masaajid K/Afrika ku yaala oo Soomaalidu leedahay.
Haddii qofka taleefoonka hilmaamo in uu damiyo cudur daar ayuu leeyahay, laakiin waxaanan cudur daar lahayn in qofka uu muusiga iska dhagaysto, dadkana salaada ka waswaasiyo isagoo heli kara in uu shubiyo taleefoonka, laakiin waxyaalaha layaabka leh waxaa ka mid ah, waxaad arkaysaa imaanka oo jamaacada xasuusinaya in taleefoonada la dansho inta aan salaada la galin, hadane marka salaada la galo muusiga waa mid dhacaya had iyo goor.
Dadka muusiga neceb waxay taleefoonadooda ku shubtaan qur’aan ama nasiidooyin diini ah ama wacdi diini ah, wallow ay wax fiican yihiin marka loo eego muusiga, wali dadkaasi waxay u baahanyihiin in ay fahmaan in wax kasta oo cod ah oo masaajidka ka dhex yeera xiliga salaada lagu jirro in uu waswaas u keenayo dadka dukanaya.
Halkani K/Afrika dadka oo dhan taleefoon ayay wada sittaan, waana wada ganacsato, sababta ugu weyn ee aysan taleefoonka u daminin ayaa la oran karaa si aysan u seegin qof arrimo ganacsi ka dhaxeeyey oo soo wacay, waxaa halkaasi ka muuqata in qofkaasi uusan dan baddan ka lahayn taleefoonka uu isaga illaah u dirayo iyo wicitaankiisa uu Rabi weyne wacayo in laga jawaabo taleefoonkaasi iyo in kale.
Ka sokow in la damiyo taleefoonka waxaa jirra labbo xal oo kale oo loo heli karro taleefoonka, mid waa in juuqla’ (silent) ama gariig aad ku xirtid taleefoonka sidaasi waxaad ku ogaan kartaa cidda kusoo wacday, waa haddii aadan wax dan ah ka lahayn fikirka qaldan ee laga fahmayo taleefoon dhacaya oo aan la qabanayn.
Xalka labaad waa in masaajidka lagu rakibaa qalabka lumiya qadka isgaarsiinta meel gaar ah, qalabkani waa mid casri ah waxaana lagu rakibaa masaajidada ay leeyihiin muslimiinta tujaarta ah, balse qalabkani ma ahan mid Soomaalida ay heli karto xiligani.